Xubno ka mid ah Wasiirada magacaaban oo lagu wado in is bedel lagu sameeyom – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xubno ka mid ah Wasiirada magacaaban oo lagu wado in is bedel lagu sameeyom
MAREEG 3 February 2015
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Ra’iisul Wasaaruhu oo leh wada tashiyo uu ku soo dhameystirayo xubnaha Golihiisa Wasiirada uu doonayo in culeyska ugu badan ee haatan uga imaanaya Baarlamaanka inuu ku yareeyo.
Wararka ayaa sheegaya in ilaa 10 Wasiiro buuxa laga yaabo in laga siiyo Baarlamaanka, iyadoo Kudlooyinka u kala qeybsamay Baarlamaanka ay midba xubno muhiim ah ka dooneyso Golaha Wasiirada, kaasoo u eg qaab awood qeybsi oo kale ama dowlad wadaag.
Hadal heynta ku aadan in Ra’iisul Wasaaruhu ku noqonayo 20-kii Wasiir ee uu horay u soo magacaabay ayaa ahaa mid aad isa soo taray, iyadoo ilo ku dhow dhow Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ay inoo xaqiijiyeen.
Lama oga tirada uu ka bedeli doono 20-kii Wasiir ee uu horay u magacaabay Ra’iisul Wasaaruhu, laakiin waa dareen mar walba ku taagan xubnahan magacaaban, maadaama aanay aheyn Xildhibaano, hadii la bedelana ay culeyskooda lahaan lahaayeen.